Fondue ho an'ny vao manomboka | Recipe ao an-dakozia
Fondue ho an'ny vao manomboka
Hana mitchell | | episeria fy
Aza mahazo azy amin'ny fromazy amin'izao fety izao! Androany aho dia manome anao toro-hevitra ho anao hitsidika ny latabatrao ity Navidad tsy mamela anao antsasaky ny karama amin'ny andrana. izany fondue ho an'ny vao manomboka Izy io dia ny Holy Grail an'ny mpitia fromazy sy mpihinana sakafo haute. Mety izany dia iray amin'ireo fomba fahandro mandeha mivantana ao amin'ny Resipeo TOP10 hitovy amin'ny Andriamanitra.
Betsaka ny fomba fanomanana fondue, saingy nanapa-kevitra ny hanohy hanao fandikana ny fomba fanaovan'i Nacho, mpandroso sakafo amin'ny iray amin'ireo toerana tiako indrindra any Madrid aho. crêpperie La Rue (c / colón). Raha mpihaza sakafo hanatsarana tarehy ianao dia amporisihiko 100% (samy hatsarana, fondue ary Nacho). 💜💛💜
Araho ny dingana tsikelikely amin'ity sakafo matsiro ity ary mankafy azy moramora.
Aza mahazo azy amin'ny fromazy! Ianaro ny tenanao ny fomba fanaovana an'io fondue io ho an'ireo vao manomboka ary gaga ireo ao an-trano. Torohevitra avo lenta ho an'ireo antoko ireo
250g fromazy Emmenthal, grated
250g fromazy gruyere, grated
Katsaka katsaka 2 sotro fihinanana
Tongolo lay jirofo 1, tapahina roa
Divay fotsy maina 250cc
Nut voamaina sotrokely
Mofo pagés 1
Voalohany, amin'ny alàlan'ny antsy dia esorinay ireo poti-mofo amin'ny alàlan'ny fanaovana boribory eo an-tampony, esorintsika ny fonony ary esorintsika ireo poti-mofo amin'ny alàlan'ny rantsantananay. Afangaronay ao anaty vilia ny fromazy miaraka amin'ny vovo-katsaka.
Izahay dia manapaka ny antsasaky ny tongolo lay ary manosotra ny fanambanin'ny vilany izay hanamboaranay ny fondue.
Arotsanay ao anaty vilany ny divay ary apetraka amin'ny hafanana antonony.
Rehefa manomboka mangotraka ny divay dia ampifangaroinay tsimoramora ny fifangaroan'ny fromazy. Afangaro amin'ny sotro hazo isika, amin'ny endrika valo (tena zava-dehibe izany).
Rehefa nahavita koba mitovy fanamiana tsy misy vongan-kazo izahay dia asio sira sy dipoavatra hanandrana ary ampio nutmeg kely aza.
Arotsanay ao anaty vilia fihinanay ny atiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » namany » episeria fy » Fondue ho an'ny vao manomboka
Afangaro ny tsaramaso maintso sy broccoli
Chickpeas misy holatra, chard ary paprika